Dadkii soo diray fariimaha lagu cabsi gelinayey cod bixiyaasha Mareykanka oo la ogaaday… – Hagaag.com
Dadkii soo diray fariimaha lagu cabsi gelinayey cod bixiyaasha Mareykanka oo la ogaaday…
Posted on 23 Oktoobar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Afar ilo wareed oo xog ogaal ah ayaa sheegay in falanqeeyayaasha dowladda Mareykanka iyo kuwa kale oo ka tirsan shirkadaha gaarka loo leeyahay ay si dhaqso leh ugu guuleysteen inay soo bandhigaan mas’uuliyada tuugada u dustay ee Iiraan oo dirtay mowjadaha kumanaan kun oo e-mail ah oo ku lug leh hanjabaado loo jeediyey cod bixiyaasha Mareykanka, waxaa ugu wacnaa in la ogaado khaladaadka ka jiray duubista fiidiyowga ee ku lifaaqan fariimaha qaar.
Guul darrooyinkaasi waxay dowladda Mareykanka siisay fursad naadir ah oo ay kula socon karto hannaanka u dusida elektoniga ee xun iyo muujinta aqoonsiga kuwa mas’uulka ka ahaa maalmo gudahood, taas oo badanaa u baahnaan laheyd bilooyin iyo kala shaandheyn farsamo iyo taageero sirdoon.
“Ama waxay sameeyeen qalad macno darro ah, ama waxay doonayeen in la qabto,” ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka, oo codsaday in aan la magacaabin.
Saacado gudahood markii la faafiyey fiidiyowga toddobaadkan, oo lagu sheegay inay soo direen koox Mareykan ah oo ka tirsan midigta xagjirka ah, oo loo yaqaan “Wiilasha islaweyn”,” Proud Boys” saraakiisha sirdoonka iyo bogagga adeegga e-mail-da ee waaweyn sida Google iyo Microsoft waxay bilaabeen inay falanqeeyaan gunta kombiyuutarka ay isticmaaleen, kaasoo Lagu soo bandhigay fiidiyowga hacker-ka.
E-mailadan ayaa dalbanaya in codbixiyeyaashu ay beddelaan ka mid ahaanshaha xisbigooda ee ay u codeeyaan Xisbiga Jamhuuriga ayna u codeeyaan madaxweyne Donald Trump. Haddii kale, “waan idin soo qabaneynaa.” In kasta oo ay umuuqato in lagasoo diray cinwaanka e-mailka khaaska u ah kooxda “Wiilasha islaweyn”, laakin cinwaanka wuxuu ahaa mid been abuur ah, sida falanqeeyayaasha amniga ay sheegeen, kooxduna waxay diidday mas’uuliyadda farriimahaasi.
Bayaan ay soo saartay Google, fiidnimadii Arbacadii, ayaa lagu sheegay in waxqabadkani uu “ku xiran yahay Iran,” afhayeen u hadlay shirkaddana wuxuu sheegay, Khamiistii, inay xiriir la sameeyeen Xafiiska Baadhista ee Federaalka.
Ilo wareedyadu waxay sheegeen in kasta oo la isku dayey in la qariyo aqoonsiga dadka soo duubay waxyaabaha ku jira cajaladda fiidiyaha, haddana jabsadayaashu way ku guuldareysteen inay qariyaan dhammaan macluumaadka iyaga lagu eedeynayo.
Muuqaalka fiidiyowga ayaa muujinaya shaashadda kombiyuutarada jabsadayaasha markii ay qorayeen amarrada iskana dhigayay inay ku dhex dhuumanayaan nidaamka diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Baarayaasha ayaa ogaaday oo arkay shaashad qarsoon oo muujineysa lambarka kombiyuutarka, oo ay ku jiraan faylasha, magacyada feylka, iyo cinwaanka IP-ga ee aaladda.
Ka sokow kumanaan e-mail ah oo ay u direen codbixiyeyaasha gobolada ay ka midka tahay Florida, burcadda waxay kaloo isku dayeen inay ku faafiyaan oo isku xiraan diiwaanka filimka iyagoo adeegsanaya account been abuur ah oo Facebook iyo Twitter ah.
Dhinaca kale, saraakiisha Iran way beeniyeen eedeymaha Mareykanka.
John Ratcliffe, agaasimaha Sirdoonka Qaranka Mareykanka, wuxuu horey u sheegay in Ruushka iyo Iiraan ay isku dayeen inay farageliyaan ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka, seddex ilo wareed ayaa sheegay in laamaha sirdoonka ay wali falanqeynayaan macluumaadka si loo ogaado cida ka mas’uulka ah howlgalka Iran iyo ujeedooyinka laga leeyahay.